Injenieria - Wikipedia
Ny injerineria dia ny fampiharana ny fahaizana siantifika, ara-toekarena ary ara-tsosialy amin'ny amin'ny famoronana, fanamboarana, fikojakojana ary amin'ny fanatsarana ny rafitra ary ny fitaovana.
1.2 Fanjakana Mitambatra
Any Etazonia dia mandalo amin'ny oniversite na anjerimanontolo ny ankamaroan'ny injeniera hahazoana diplaoma. Mankany an-tsekoly mandritra ny efa-taona mba hahazo mari-pahaizana (lisansa) amin'ny injenieria ny ankamaroan'ny vahoaka te ho injeniera. Afaka miditra amin'ny fandaharana dôktôrà ny manana mari-pahaizana Master mba hahazo diplaoma dôktôrà na PhD. Efa-taona ihany koa no ilaina amin'io fandaharana io ary ao amin'izany ny famelabelaran-kevitra amin'ny lohahevitra nikarohany. Rehefa ampy ny traikefa azo amin'ny asa dia afaka manao ho Injeniera matihanina (professional engineer) izy na manamafy ny fahaizany manokana.
Any Fanjakana Mitambatra, ny diplaoma ho injeniera ao amin'ny anjerimanontolo dia na telo taona na efatra taona. Amin'ny oniversite maro dia mahazatra ny maka injenieria amin'ny famaizana iray ihany (oh: injeniera sivily na aerônaotika). Manolotra fandaharana ho toy ny dokotera ny filozofia (PhD) na ny dokotera ny injeniera (EngD) ihany koa ny anjerimanontolo britanika.
Ny fomba tsara indrindra ho injeniera ao Frantsa dia ny mandray ny CPGE (classe Preparatoire les Grandes Écoles dia ny kilasy frantsay ho an'ny sekolin'injeniera) nandritra ny roa taona, ary avy eo nianatra nandritra ny telo taona ao amin'ny "École d'Ingénieur" (Engineer ny sekoly). Afaka mianatra koa ny ao amin'ny IUT (Institut universitaire technologique) nandritra ny roa taona, ary avy eo mianatra telo taona tao amin'ny "École d'Ingénieur".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Injenieria&oldid=818439"
Dernière modification le 27 Jolay 2018, à 05:48
Voaova farany tamin'ny 27 Jolay 2018 amin'ny 05:48 ity pejy ity.